च्याङ्ग्रा महँगियो त के भो ? लोकल कुखुरा छँदै छन् नी ! – दैनिक नेपाल न्युज
बागलुङ, २३ असोजः हो, दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु खान सबैको गच्छेले भ्याउँदैन । यसपालि त झन् च्याङ्ग्रा धेरैका लागि रहरमा मात्र सीमित हुनेवाला छ । बजारमा रोज्जा च्याङ्ग्रालाई रु ४० हजार पर्छ । पसलबाट मासु किनेर खाँदा प्रतिकिलो रु दुई हजार । अब आफैँ भन्नुस्, आम मान्छेले कसरी खान सक्छन्, च्याङ्ग्राको मासु । यो त केबल हुनेखानेको भान्सामा मात्र पो पाक्ने भयो । के गरिब र श्रमजीवीले दसैँमा मिठोमसिनो खान नपाउनु ! यो प्रश्नले हर कोहीलाई बिझाएको हुनुपर्छ ।
हिमालपारिबाट भित्रने च्याङ्ग्राको भाउ बर्सेनि बढेकै हुन्छ । पछिल्ला चार वर्षमा च्याङ्ग्राको मूल्य दोब्बरले महँगिएको व्यापारी बताउँछन् । कोभिड–१९ का कारण तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा कम आउनु, बढ्दो करजस्ता कारणले मूल्य आकासिँदै गएको हो । व्यापारी महेन्द्र केसीले मुस्ताङको जोमसोम पुगेर दसैँलाई च्याङ्ग्रा ल्याएको बताउनुभयो । भाउ महँगिएका कारण पहिले झैँ धेरै च्याङ्ग्रा नल्याएको उहाँले सुनाउनुभयो । सदरमुकाममा मासु पसलसमेत चलाउँदै आउनुभएका केसीले एककिलो च्याङ्ग्रोको मासुलाई रु एकसय ८०० मा बेच्दै आउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार कतिपय पसलेले रु दुई हजारसम्ममा बेच्ने गरेका छन् । यसरी च्याङ्ग्राको भाउ छोइनसक्नुभएका बेला यहाँका कुखुरापालक किसानले दसैँमा स्वादिष्ट लोकल कुखुरा उपलब्ध गराएका छन् । भाउ पनि च्याङ्ग्राभन्दा सस्तो छ । गलकोट नगरपालिका–६ मजुवाफाँटस्थित दरमखोला एग्रीकल्चर एण्ड लाइभस्टक फार्मका सञ्चालक छुमबहादुर थापाले ३०० लोकल कुखुरा बेच्नका लागि ठिक्क भएको बताउनुभयो । साकिने, घाँटीखुइले, उल्टेलगायत लोकल जातका कुखुरा फार्ममा छन् ।
“एक किलाको रु ७५० मूल्य छ, चाडबाडमा कुखुराको बिक्री बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दसैँमा बोका, च्याङ्ग्रा किन्न नसक्नेलाई लोकल कुखरा नै ठिक छ ।” स्वादिष्ट र स्वस्थकर हुने हुँदा लोकल कुखुराप्रति उपभोक्ताको रुचि छ । लोकल जातका कुखुराको व्यावसायिकपालन पनि बढ्दो छ । बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटाका अगुवा किसान वैकुण्ठ सापकोटाका अनुसार जिल्लाभर ५० भन्दाबढी किसान लोकल जातका कुखुरापालनमा संलग्न छन् । पहिले ब्रोइलर, कोइलर जस्ता उन्नत प्रजातिका कुखुराको बजार अत्यधिक थियो ।
लोकल जातको कुखुरा हुर्कन समय लाग्ने हुँदा पाँच/छ महिनापछि मात्र बेच्न योग्य हुन्छ । खुला ठाउँमा चर्ने र गाउँकै दानापानी खाने भएकाले लोकल कुखुरा पौष्टिक र स्वादिष्ट हुन्छन् । “ब्रोइलर कुखुरालाई जस्तो नियमित भ्याक्सिन, औषधि दिनु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बारी र पाखामा छोडेर हुर्काउने गरिन्छ ।”
रातमाटामा सापकोटासँगै भविन्द्र विक, विजय शर्मालगायत लोकल जातका कुखुरापालनमा लागेका छन् । चौध वर्षसम्म मलेसियामा श्रम–पसिना बगाएर फर्कनुभएका विक र विदेश जाने चक्करमा पटकपटक हण्डर खानुभएका उहाँले लोकल कुखुरामा आफ्नो भविष्य देख्नुभएको छ । (रासस)